Wasiirka Amniga Jubaland oo sheegay in Kenya ay dhul balaarsi ay ka waddo Gedo – Kismaayo24 News Agency
Wasiirka Amniga Jubaland oo sheegay in Kenya ay dhul balaarsi ay ka waddo Gedo
by Ahmed sudani 26th December 2017 046
Wasiirku waxaa uu bulshada u sheegay inaysan jirin wax raali ah oo Dowladda Kenya looga yahay inay qaadato taako ka mid ah dhulka Somaliya, isla-markaana ay ka dhiidhin doonaan in xaafado ka mid ah Degmada Baled Xaawo ay Kenya ku darsato dhulkeeda.
C/rashiid Xasan C/nuur, Wasiirka Amniga Jubbaland, ayaa intaa ku daray Ciidanka Kenya inaanan loo ogolaan doonin markale inay dhul cabir ka sameeyaan Degmada Baled Xaawo.
Kenya, ayaa kol hore sheegtay in xuduuda labada dal ay ka dhisi doonto darbi kala qaybiya, iyadoona tallaabadaasi ku sheegtay mid ay kaga hortageyso weerarada kaga imaanaya Xarakada Al Shabaab, balse waxaa muuqata in qorshaheedu uu sidaasi ka fogyahay.
Madaxweyne Farmaajo oo amray in hoggaanka Ciidamada lagu wareejiyo saraakiisha Dhallinyarada ah
Jowhar:-Baarlamaanka Hirshabeelo Oo Maanta yeelanaya Kulan aan caadi aheyn
Daawo: Xildhibaanada Guurtida Soomaliland oo Amar culus dul dhigay Muuse biixi kuna baaqay in Imaaraat-ka laga….
War Cusub: Maxaad ka ogtahay Waxa Maanta ka Dhacay Xafiiska Raisul Wasaaraha Soomaliya????+SAWIRRO
Daawo: Maxaadan ogeyn oo looga hadlay shirka golaha wasiirada jubbaland oo axmad madoobe uu….
Tifaftiraha K24 9th March 2017